पाेखरामा प्रेस चौतारी महाधिवेशनमा नेकपा अध्यक्ष ओलीकाे डेढ घन्टा लामो सम्बोधन • Nepal's Trusted Digital Newspaperपाेखरामा प्रेस चौतारी महाधिवेशनमा नेकपा अध्यक्ष ओलीकाे डेढ घन्टा लामो सम्बोधन • Nepal's Trusted Digital Newspaper
पाेखरामा प्रेस चौतारी महाधिवेशनमा नेकपा अध्यक्ष ओलीकाे डेढ घन्टा लामो सम्बोधन
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्धारा पत्रकारहरूलाई ”उपदेश”
पोखरा । पाेखरामा भएकाे प्रेस चौतारी नेपालको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीसम्वद्ध लाई करिब डेढ घन्टा लामो सम्बोधन गर्नुभएकाे छ ।
सम्बोधनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा के लेख्ने र के नलेख्ने मात्र होइन, नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आउनुभएका पत्रकारहरूलाई पत्रकारिताबारे पनि सुझाउनुभएकाे छ । पत्रकारिताको इतिहासदेखि बोल्नुभएका ओलीले आफ्नो विरोधमा समाचार नआए नेपाली मिडियामा एकपक्षीय भयो भन्ने गरिएको बताउनुभयाे ।
एमालेको विरोधमा लेख्नुलाई आलोचनात्मक चेत मानिने गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयाे, ‘ खै त केपी ओलीको विरोध तपाईंको मिडियामा ? यो त एकपक्षीय भयो नि भन्छन् । परमादेशीहरु आलोचनात्मक चेत भएका, चुच्चेनक्साको विरोध गर्नेहरु आलोचनात्मक चेत भएका, धरहरा बनेकोमा टाउको दुख्नेहरु अलोचनात्मक चेत भएका भन्छन् । परमादेशीहरुको पक्षमा खुरुखुरु लेख्दा वुद्धिजीवी हुन्छ ।’
प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा नेपालमा एल्लो जर्नालिजम हुने गरेको भन्दै उहाँले आलोचना गर्नुभयाे । साथै उहाँहरुले जनतालाई बताएका गलत कुराहरु चिर्न पार्टीसम्वद्ध पत्रकारहरुलाई आग्रह गर्नुभयाे ।
सम्बोधनका क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनसँगै सर्वोच्च अदालतप्रति पनि कटाक्ष व्‍यक्त गर्नुभयाे । वर्गीय पूर्वाग्रह राखेर आफूले गरेको संसद विघटन उल्टाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयाे, ‘उहिल्यै एक जनाले भनेका थिए, सर्वोच्च अदालतमा गोरु व्यायो । यो पटक गोरु ब्यायो मात्र होइन, ५ वटा बाच्छा पनि पायो ।’
पूर्वसहकर्मी प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको आलोचना गर्दै उहाँले दशा लागेर आफ्नो सरकार ढालेको बताउनुभयाे । उहाँले अघि भन्नुभयाे, ‘सरकार ढालेर हेर्नुस् त विचराहरु ढोका बाहिर पर्खेर बस्नु परेको छ । कोही प्रसाद बाँड्न आउँछ कि भनेर । कताका जंगेहरु, कताका बुंगे भए । वुद्धि बिग्रिएपछि यस्तो हुन्छ ।’
अहिले राष्ट्रिय राजनीति दुईतिर बाँडिएको ओलीले बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे एउटा देशभक्तिको पक्षमा, अर्को जालझेल र षडयन्त्रको पक्षमा रहेका भन्दै , निर्वाचनका माध्यमबाटै ठेगान लगाउन सक्छौं । महान जनताको साथ हामीलाई छ ।’
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे बोल्दै उहाँले प्रविधिको सही प्रयोग गर्न पनि सुझाउनुभएकाे छ । ‘आज हामी इलोक्ट्रोनिक जमानामा छौं, सामाजिक सञ्जालको जमानामा छौं, आज एउटा ट्वीट गर्दा दुनियाँभरि पुग्छ । फेसबुकमा लेख्दा दुनियाँभरि पुग्छ,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयाे, ‘ट्वीट गर्दा यस्तो गरौं, जो सही उचित हुन सकोस् । हाम्रो फेसबुक स्टाटसले राम्रो कुरा दिओस् । हामीले अनावश्यक रुपमा नलेखौं ।’
‘हामी यसरी फेसबुक स्टाटस लेख्न थालेका छौं कि प्यास लाग्यो पानी खाउँ कि क्याहो ? भनेर फेसबुकमा पनि लेख्यो, पानी पनि खायो । पानी खायो कस्तो आनन्द आयो भन्यो फेरि फेसबुकमा लेख्यो । हाम्रो लेखाइले, हाम्रो स्टाटसले, हामीले बनाइदिएको टिकटकले समय बर्बाद अरुको पनि नगरिदिओस् ।’